multiboot pendrive တစ်ခုကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲ Linux မှ
Multisystem နှင့်တစ် ဦး အတွက်ခွင့်ပြုပါတယ် USB ကိုသုံးပါ ရှိ အမျိုးမျိုးသော Linux ကိုဖြန့်ဝေ ကွန်ပြူတာမှာဘာကိုမှ install လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် pendrive တွင်နေရာလွတ်များရှိသကဲ့သို့ Linux version အများအပြားကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်လုပ်နိုင်လိမ့်မည် ရှေးခယျြ ၏ဂရပ်ဖစ် menu ကနေ system ကိုစတင်ရန်နှင့်အတူ GRUB ၂.၁၁.
ပရိုဂရမ်ကိုထည့်သွင်းရန်၎င်း၏စာမျက်နှာပေါ်ရှိညွှန်ကြားချက်များကိုသာလိုက်နာပါ (http://liveusb.infoUbuntu ရှိရင် Installation script ကိုအောက်ပါအတိုင်းတိုက်ရိုက် download လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဖိုင်ကို download လုပ်ပါ။
ကူးယူထားသောဖိုင်ကိုကျွန်ုပ် unzipped လုပ်သည်။
အခြား distros များရှိသူများသည်ဤအခြား installation လက်စွဲကိုလိုက်နာနိုင်သည်။
ဒီတစ်ခုလုပ်သည်က application ၏ repository ကိုပေါင်းထည့်ပြီးမှီခိုမှုအားလုံးကိုထည့်သွင်းပါ။ သူတို့တွင် virtual machine qemu စသည်တို့ထည့်သွင်းပါ။
qemu ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ usb ချိတ်ဆက်ထားသောကွန်ပျူတာကိုကွန်ပျူတာမလိုဘဲ usb boot system ကိုစမ်းသပ်ရန်ဖြစ်သည်။
မြင်နိုင်တဲ့အတိုင်း program က boot menu ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့၊ USB မှတ်ဉာဏ်ကို format လုပ်ဖို့၊ လူကြိုက်များတဲ့ ISOs တွေကို download လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပေးတယ်။
နောက်ဆုံးရလဒ်အနေဖြင့်ကွန်ပျူတာကို Pendrive ဖြင့်ပြန်လည်စတင်သည့်အခါ -
GRUB2မီနူးသည် pendrive တွင်တပ်ဆင်ထားသောဒရော့စ်အားလုံးနှင့်အတူ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » multiboot pendrive တစ်ခုကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲ။ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လမ်းညွှန်
Multiboot သည် linux အားလုံးအတွက်အလုပ်လုပ်သည်။ သို့သော်ရိုးရှင်းသောလုပ်ဆောင်ရန်သည်အလွန်ဂရပ်ဖစ်သို့မဟုတ် KISS မဟုတ်သော်လည်း virtualbox မှ Multisystem ကိုအသုံးပြုရန်သင်၏ ubuntu ISO မှ Multisystem link ကိုပို့လိုက်သည်။ ၎င်းသည် Qemu နှင့်လည်းအဆင်ပြေမည်ဖြစ်သည်။
Isaiah Gätjens M ဟုသူကပြောသည်
ငါက Ubuntu နဲ့ Windows XP installer ကို pendrive တစ်ခုတည်းမှာပဲထားထားတယ်။ ဒါပေမယ့်အစမှာ pendrive နဲ့ boot တက်လာရင် menu ကနည်းနည်းလွဲသွားတယ်၊ နည်းနည်းစူးစမ်းပြီးစမ်းသပ်မှုနဲ့အမှားတစ်ခုကအဲဒါကိုအသုံးပြလာတယ်၊ ကောင်းပြီ
IsaíasGätjens M ကိုပြန်ပြောပါ
wget သည် http://liveusb.info/MultiBoot-v3/install-depot-multiboot.sh.tar.bz2
liveusb.info … 92.243.9.215 အားဖြေရှင်းခြင်း
liveusb.info သို့ဆက်သွယ်ခြင်း | 92.243.9.215 |: 80 ... connection ။
တုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ဆိုင်းနေပြီး HTTP တောင်းဆိုမှု… 404 မတွေ့ပါ
2011-11-24 17:52:04 အမှား 404: မတှေ့ရ။
spamming လုပ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်မရှိပါကကျွန်ုပ်သည် sites များစွာတွင်တင်ထားသော post ကို ပြန်၍ လိုချင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လူတို့သည်ဤ application သည်ရှုပ်ထွေးပြီးသုံးစွဲရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးအလွန်အစွမ်းထက်သည်။ အဲဒါကိုဘယ်လိုအသုံးမပြုတော့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လုံးဝနားမလည်နိုင်ဘူး။
ပထမ၊ အလွန်ရှင်းလင်းသည် - သင်သည်သင်၏ DISTANCE တွင် MultiSystem ကိုတပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်သည်ကိုအကျဉ်းချုံးရန်ကြိုးစားမည် (မည်သည့် distro အတွက်မှန်ကန်သောစနစ်၊ winbug $ အတွက်ပင်)
၁ ဤ link မှ MultiSystem iso ကိုကျွန်ုပ် download လုပ်ပါသည်။
၂။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာမည်သည့် command ကို dd, unetbootin နှင့်အတူ penlive (A) ပေါ်တွင်တင်မည်။
အနည်းဆုံး 8 GB GB သုံးနိုင်သော Pendrive ကိုသုံးပါ။ (ယနေ့ကျွန်ုပ်သည် ၁၆ GB အသုံးပြုသည်။ ယနေ့သူတို့အလွန်စျေးပေါသည်)၊ ဘောပင်ပိုကြီးလေ၊ သူတို့အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မှုများလေလေပျော်ရွှင်မှုများလေလေဖြစ်သည်။
၃ ။ MultiSystem penlive (A) ကို pc မှ (အနည်းဆုံး ၈ GB) ထပ်မံထုတ်သည်။
၄။ FAT4တွင် format လုပ်သည့်အခြား pendrive (B) ကိုထည့်သည်။ (MultiSystem က၎င်းကိုလည်း format နိုင်သည်) ကျွန်ုပ်ပထမလုပ်သည်မှာ MultiSystem iso (B) သို့ထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။
၅။ ကလောင် A (သို့) B မှ isosos ၏အရာများကိုတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ပေါင်းထည့်သည်။
နောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်တို့တွင်တစ်ခုထက်ပိုသောစံချိန်တင်တံ ၂ ခုရှိသည်။ ပြီးတော့သူတို့တစ်ခုချင်းစီမှာ MultiSystem iso တစ်ခုစီရှိပြီး penlive generator ဖြစ်တယ်။
ယခုတွင်သင်သည် penlives များထဲမှတစ်ခု၊ disk တစ်ခုသို့မဟုတ် distros ၏ isos များပါသော pendrive သာလိုအပ်သည်။ (၎င်းသည်၎င်းကိုသယ်ဆောင်ရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြောင့်၎င်းကိုသယ်ဆောင်ရန်ပိုကောင်းသည်။ သို့သော်၎င်းကိုသယ်ဆောင်ရန်ပိုကောင်းသည်) သင် penlives များကိုလူတိုင်းဖန်တီးနိုင်သည်။
Support distros များစာရင်းသည်အလွန်ကြီးမားသည်။
အကယ်၍ distro ဗားရှင်းအသစ် (Debian 7.5, Ubuntu 14, Mint 17) ထွက်လာလျှင်၊ ဗားရှင်းအဟောင်း (Debian 7, Ubuntu 13, Mint 16) ကိုဖျက်ပစ်ပြီးအသစ်ကိုဘောပင်ထဲသို့ထည့်ရမည်။
ထိပ်ဖျား: Multisystem GNU / Linux distros များနှင့်ဖန်တီးထားသည့်တူညီသော penlive ကိုမရောထွေးပါနှင့် winbug $ install lives ။ operating system တစ်ခုစီအတွက်မတူညီသော penlive ။
သင်မည်သည့် win tool ကိုမဆိုထည့်နိုင်သည်ဆိုပါကဥပမာအားဖြင့် antivirus တစ်ခု (Kaspersky live) ကို GNULinux distros ရှိသောဘောပင်တစ်ချောင်းတွင်ထည့်နိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားပြီးအလုပ်လုပ်သည်။
Multisystem နှင့်အတူစာသားများစွာကို penlives များကိုဖန်တီးခဲ့သူကဤအရာကိုသင့်အားပြောပြသည်။
ငါတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကြိုးစားခဲ့ခြင်းနှင့်မဆိုပြproblemနာမရှိဘဲဤ utility ကိုနှင့်အတူ distros အများအပြား install လုပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်သည် Multisystem ဖြင့်ဖန်တီးထားသော live mode distros များကိုနာရီများစွာအတွက်မဟုတ်ဘဲ hard drive မရှိဘဲ pc ပေါ်တွင်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ် အသုံးပြု၍ သော်လည်းကောင်းပြproblemနာမရှိဘဲအသုံးပြုခဲ့ပါသည်။
လှည့်ကွက် - သင်က persistent distros တစ်ခုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်တစ် ဦး တည်းအတွက်သာလျှင်လုပ်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်နေရာအလုံအလောက်ထားခဲ့လျှင် (ပရိုဂရမ်များကိုအဆင့်မြှင့်ရန်နှင့်ဖိုင်ထဲ၌ဖိုင်များကိုသိမ်းရန်အနည်းဆုံး ၁ GB)
MultiSystem မပံ့ပိုးနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာသည် system တစ်ခုလုံးကို update လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ သင်ဘာသာစကားများနှင့်ပရိုဂရမ်များကိုထည့်သွင်း / ဖယ်ထုတ်နိုင်သည်၊ ဘရောင်ဇာကိုတိုးချဲ့ခြင်းများထည့်သွင်းနိုင်သည်၊ ဖိုင်များကို persistent distro အတွက်သိုလှောင်ထားသည့်နေရာတွင်သိမ်းနိုင်သည်။ သို့သော် persistent distro ကို aptitude update သို့မဟုတ် pacman -Syu ပေးရန်မကြိုးစားပါနှင့်။
ဒါပေမယ့်ငါသေချာတာကကျွန်တော်ဟာ MultiSystem ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာပြproblemsနာမရှိဘဲသုံးခဲ့တာပါ။
ငါဒီ site ၏အယ်ဒီတာများအားတစ်ချိန်ကဤအသုံးချမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုအသေးစိတ်ကျသောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးရန်အကြံပြုသည်။
သင် MultiSystem အကြောင်းဒီပြီးပြည့်စုံသော post ကိုဖတ်နိုင်နေစဉ်:
နောက်ဆုံးတော့တစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိထားရန်လိုအပ်သည်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားသည် .. !! linux mint ၁၇။ အခန်းကဏ္ change များကိုပြောင်းလဲတော့မည်။ persistence ကို linuxmint မှဖယ်ထုတ်ပြီး debian သို့ပေးမည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် x 100000 ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် execute file ကို install လုပ်ချင်သောနေရာသို့ရောက်သွားသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်အားအမှားတစ်ခုပေးသည်။
lilian အတွက် [sudo] စကားဝှက်
sudo: ./install-depot-multiboot.sh: command ကိုမတွေ့ပါ
bash: ./install-depot-multiboot.sh: ဖိုင်သို့မဟုတ်ဖိုင်တွဲမရှိပါ
lilian @ lilian-လတ္တီတွဒ် -E6320: ~ $
ငါ sudo ကိုအရင်စမ်းကြည့်တယ်၊ ပြီးတော့အပြင်မထွက်ဘူး၊
Xfce တွင် application menu ကိုဖွင့်သောအခါ crash ကိုပြုပြင်ပါ